Obodo kacha mma n'ụwa maka nka okporo ụzọ - site na New York City ruo Paris
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » omenala » Obodo kacha mma n'ụwa maka nka okporo ụzọ - site na New York City ruo Paris
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • omenala • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Obodo kacha mma n'ụwa maka nka okporo ụzọ - site na New York City ruo Paris.
Nkà n'okporo ámá aghọwowanye ewu ewu, ma taa bụ akụkụ a nabatara nke ndụ obodo na narị afọ nke 21 site na ọtụtụ.
Venice na-ewere ọnọdụ dị elu, dịka obodo kachasị mma maka nka na omenala n'ụwa. Obodo a bụkwa ebe ncheta na ihe akpụrụ akpụ kachasị nka, ma nweekwa ụlọ nwere nnukwu ụlọ n'otu nde mmadụ karịa obodo ọ bụla ọzọ.
Obodo kacha nwee ụlọ ngosi nka bụ Santa Fe, United States. Santa Fe nwekwara ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, nke kachasị ewu ewu gụnyere Georgia O'Keeffe Museum na New Mexico Museum of Art.
Vienna na-azụlite ọgbọ ọhụrụ nke nnukwu nka nka na oke nka nke nka & imewe mahadum.
Site na ọrụ akara ngosi nke Banksy, ruo na ọmarịcha ihe osise nke ndị na-ese ihe na mpaghara na-abịa, nka n'okporo ámá na-ewu ewu nke ukwuu, na taa bụ akụkụ a nabatara nke ndụ obodo na narị afọ nke 21 nke ọtụtụ.
Mana, olee obodo ndị na-akwado nka n'okporo ámá, ebe ebe kacha mma iji nwee mmasị na ya?
Na nso nso a lere anya obodo 40 zuru ụwa ọnụ, mara karịsịa maka ihe ngosi nka pụrụ iche, na-enyocha obodo ndị nwere mgbasa ozi Instagram kacha #streetart na Google na-achọgharị ihe karịrị otu afọ, na-ekpughe obodo kachasị mma n'ụwa maka nkà n'okporo ámá.
Obodo 10 kacha nwee 'ihe nka okporo ụzọ' Instagrammed
(Ọnụ ọgụgụ nke posts Instagram na-egosipụta hashtags na-eji aha obodo na-esote okwu ahụ bụ "nkà okporo ụzọ").
n'usoro mmetụta Mkpokọta ọnụọgụ nke nka okporo ụzọ Instagram biputere
10 Singapore 8,120
Ọ bụ ezie na US emeghị ya n'ime 3 kachasị elu, ha na-achịkwa nke fọdụrụ n'ime 10 kachasị elu, yana New York City, Miami, Los Angeles, Chicago na San Francisco niile na-egosi ebe ama ama maka ihe ngosi nka n'okporo ámá.
Ebe nka ama ama nke Paris, bụ obodo kacha nwee akara maka ọnụọgụ nka n'okporo ámá Instagram biputere, yana ngụkọta nke 64,000. Nkà n'okporo ámá dị na Paris adịbeghị ndụ ma dị ike karịa ka ọ dị taa, ebe obibi nke ndị na-ese ihe dị ka Jef Aérosol, ị nwere ike ịhụ ụfọdụ n'ime ihe nkiri kachasị mma na ogige Canal Saint-Denis na Belleville.
Achọpụtara Berlin ka ọ nwere ihe osise Instagram nke abụọ kachasị n'okporo ụzọ, yana ngụkọta nke 39,000. Berlin abụrụla isi obodo ama ama nke nka okporo ụzọ ruo ọtụtụ afọ, yana nka n'okporo ụzọ gafere n'akụkụ ọdịda anyanwụ nke mgbidi Berlin na-enye ndabere Instagram ama ama.
N'ọkwa nke atọ bụ London. Nkà okporo ámá London abụrụla akụkụ nke àgwà obodo ahụ, ebe ndị njem nlegharị anya si n'akụkụ ụwa nile na-aga ịhụ ihe okike pụrụ iche n'ofe ndị dị ka Brick Lane na Camden.
Nchọpụta ahụ gosikwara obodo ise kachasị elu na-achọ 'ihe nka n'okporo ụzọ' kacha:
(Ọnụ ọgụgụ ugboro aha obodo nke okwu ahụ bụ "nkà okporo ụzọ" sochiri na Google n'etiti Septemba 2020 na Ọgọst 2021)
n'usoro mmetụta Ngụkọta ọnụ ọgụgụ nke nka okporo ụzọ Google ọchụchọ
Na-ewere ọnọdụ kacha elu n'oge a bụ London, yana ngụkọta ihe karịrị 524,000 nyocha okporo ụzọ kwa afọ. Obodo a nwere ụfọdụ ọrụ ndị nka na-enweghị atụ, ma taa, e mepụtala ọtụtụ ntuziaka njem iji nyere ndị njem nlegharị anya n'obodo ahụ aka ịnya ụfọdụ ndị kacha mma.
Ntụle ọmụmụ ihe ọzọ:
Venice na-ewere ọnọdụ dị elu, dịka obodo kachasị mma n'ozuzu maka nka na omenala n'ụwa. Obodo a bụkwa ebe ncheta na ihe akpụrụ akpụ kachasị nka, ma nweekwa ụlọ nwere nnukwu ụlọ n'otu nde mmadụ karịa obodo ọ bụla ọzọ.